Farshaxanada ka soo baxa badhamada
Ma ogtahay waxa la siinayo ilmo jiran ama dugsi u baahan yahay gacmo-gacmeed? Waxaad siisaa "bisad" -daadigaaga - sanduuq ku leh badhamada. Mala-awaalka waxqabadka carruurta ma laha xuduud, ilmuhu wuxuu ku faraxsanaan doonaa inuu sameeyo waxyaabaha ay ka sameysan karaan badhamada haddii uu ogyahay waxa laga qaban karo. Waxay noqon kartaa mid faa'iido leh, waxyaabo qurux badan adiga iyo gurigaaga.
Maxaa laga samayn karaa badhamada: fikradaha
Halkan waxa ah waxa aad ka qaban karto badhida caadiga ah:
Laga soo bilaabo badhida qolalka ee hal dherer ah waxay ku taallaa hoos kuleylka , iyaga oo ku tolaya bakeet, darbiyo, dareemay.
Buttons waxay qurxin karaan wareegyada . Saameyno wax-qabad ah oo kala duwan oo ka mid ah badhanka cabbirka ee midabka midab ama midabyo kala duwan, laakiin cabbirka isku mid ah. Qeybaha yaryar ee yaryar, qaababka xargaha ayaa la dhigaa. Qaababkani, jidka, waxaad ku dhejin kartaa sanduuq, waxaadna heli doontaa sanduuq yar waxyaabo yaryar. Samee iyaga oo ah mid aad u iftiimaya oo wax ku ool ah waxay ka caawineysaa timaha lagu buufiyo jajabyo.
Waxay xitaa sameeyaan sawirada dhan ee badhamada . Sawirrada Mosaic waxaa laga sameeyaa alaabo kala duwan iyo badhamada, ma aha wax ka reeban, haddii ay jiraan midabyo badan oo kala duwan. Waxaad qaadan kartaa beterasha isku midka ah, rinji leh cirbadaha ciddiyaha ama rinjiga aerosol. Miisaaniyada badhamada ayaa labadaba loo samayn karaa dhar, iyo kartoon, caag, iyo geed si ay ugu garaacaan ciddiyaha yar. Si uu u bilaabo, ilmuhu wuxuu si fudud u dhigi doonaa geedka, maro, ubax ama dhar gashan gabar. Isku darka badhanka cagaha oo leh cagaha hoose, raadso sawirro xiiso leh saddex-muuqaal. Gali qaabka.
Ubaxyada badhanka. Sida caadiga ah badhamada oo dhan ayaa lagu kaydiyaa hal sanduuq oo maahan mid aad ufiican. Qeybaha isku midka ah ee cabbirka isku midka ah, oo laga duubay cirbadda, waxay noqon doonaan boodhka sariir-cirbadda. Uma baahnid inay kala firdhaan, si sahlan oo ay u helaan oo dhakhso u dhajiyaan, haddii ay yihiin midab isku mid ah oo leh boogta nabar yar oo irbad ah. Laga soo bilaabo badhannada midabka midabada kala duwan ee kala duwan, bouquets dhan ee midabada badhanka la soo ururiyey. On madhxin ah silig maro cagaaran ku dhejisaa badhanka ugu weyn, si Firfircoon ama foomka tufaax ah kuwa kale ku dheji. Bartamaha waxaa lagu daboolaa badhanka jaalaha ah ama madow.
Bijouterie laga bilaabo badhamada
Beauty waxaa loo yaqaanaa inay tahay xoog xoog leh! Wuxuu xooga saaraa oo kobciyaa quruxda dharka sariirta. Qurxinta sirta ah, qurxinta, quraaradaha, brooches, santuuqa iyo jijimooyinka - ayaa laga samayn karaa badhamada kali ahaan, iyo iyadoo la socda alaabooyin kala duwan. Waxaa jira badhano aad u qurux badan. Dharka dahabiga ah ayaa kaa caawin doona inaad ku istaagtid jawi kasta iyo dhalinyaro, iyo gabadh halis ah.
Xidhanada waxay ku socon doonaan badhanka wadaagga iyagoo leh godad, waxaa lagu soo ururin karaa xarig midab leh ama xadhig. Haddii aad ku xirto dhowr boodhyo leh qaabka xargaha, xitaa si kasta oo amar ah, waxaan heli doonaa quruxsan qurux badan. Haweeney aad u culus, qurux badan oo lagu qadarinayo waxay noqon doontaa daboolka qaaliga qaaliga ah ee lugaha, dhajiyo silsilad;
Kawarno ayaa lagu sameeyaa adigoo xargo saaraya hilibka adhiga ka soo baxa. Kawarka ma aha in la demiyo - badhanka ayaa lagu dari karaa haddii aad ka soo qaadatid xajmiga iyo midabka dhagaxyada;
Rinjiyeyaasha iyo madax-xuubka waxaa laga sameeyaa badhanka caadiga ah. Waxay ku urursan yihiin xargaha xargaha ama khadka kalluumeysiga, sida ciddiyaha. Waxaad ku tolan kartaa koox adag oo midab leh;
badhano badan oo yar ayaa qurxiya suunka , iyo kuwa kala duwan - bacda denimka.
Sidee loo xiraa dharka sariirta?
Tattoo Choker gacmihiisa
Afka xayawaan leh gacmahooda
Geedka geedo leh macaroni
Sidee loo sameeyaa qaanso qaansadeed?
Sidee loo xiraa dabool?
Xiddoyada Toddobaadka Pancake
Xusuusta sanadka cusub ee kaabayaasha
Dareemista quudinta - jaantuska fasalka iyo jaangooyada
Tilda waa princess ah digir
Xirfadaha Paster-ka ee gacmahooda
U istaag ukumaha gacmahaaga
Wicitaanada waraaqaha ah ee waraaqda ah
Tile ee qaabka Provence
Dhar gasho qaanso
Imisa ciriiri ayaa ku sameynaya bisad?
Ma laga yaabaa in lagu daaweeyo rhinitis?
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka calaamadaha jootada
Gogol galka carruurta ee gabdhaha
Muujinta indhaha xun - sida loo xirto?
Arthritis-ka laf-dhabarka - daaweynta
Kabaha dhirta Burberry
Unugyada qafiifka ah
Sidee loo sameeyaa compost?
Eco Slim oo lumiya miisaanka
Albaabka automaticka ah
Wedding photo shoot in jiilaalka
Chryps ee carruurta
Gaadiidka Saudi Arabia
Sii jiritaanka dareenka